Tani waa a 3D dadka counter, taas oo ah mid aad u horumarsan 3D dadka tirinaya Mashiinka suuqa, waxayna sidoo kale bixisaa shaqada xakamaynta Shaqada, Qaar badan oo naga mid ah Nidaamka tirinta dadkawaa alaab shati leh. Si looga fogaado xatooyada, ma aanan saarin waxyaabo aad u badan bogga. Waad la xiriiri kartaa kuwayaga iibinta ssi aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan noo Nidaamka tirinta dadka.
HPC009 nidaamka tirinta dadka wuxuu adeegsadaa qaab istiraatiiji ah oo laba-kamarad ah oo qoto-dheer oo algorithm ah si firfircoon loogu ogaado iskutallaabta, dhererka iyo socodka dhaqdhaqaaqa bartilmaameedka, si markaa loo helo xogta saxda ah ee waqtiga socodka rakaabka, iyo dhisme Huawei ah oo xoojinaya mashiinka qalabka fiidiyowga processor-ka waxqabadka sare ee isgaarsiinta, Aqoonsiga saxda ah ee bartilmaameedyada badan, sifeynta tooska ah ee faragelinta wakhti kasta.
HPC009 Nidaamka tirinta dadkasaameyn kuma yeelanayso iftiinka deegaanka, iftiinka iyo hooska, waana la rogrogmi karaa si dabacsan si loola kulmo xaalado badan oo dalab ah. Waxaa badanaa loo isticmaalaa matxafyada, beeraha nasashada, xarumaha laga dukaameysto, dukaamada silsiladaha iyo xaaladaha kale si toos ah loogu tiriyo socodka rakaabka. Qiyaasta mitirka mitirka ee deegaanka ayaa lagu habeyn karaa iyada oo loo marayo qalabka macmiilka. Aagga tirinta, jihada tirinta iyo macluumaad kale ayaa lagu soo bandhigi karaa khadka tooska ah, natiijooyinka tirinta ayaa ku cad muuqaal ahaan.
Dadka tirinaya Mashiinka wuxuu si toos ah ugu xiraa serverka daruuriga ah adoo adeegsanaya fiilo network ama WIFI ah, wuxuu ku soo shubayaa xogta waqtiga dhabta ah, ka dibna wuxuu weydiinayaa xogta socodka rakaabka ee ay xisaabisay 3D dadka counter in waqtiga dhabta ah iyada oo loo marayo madal daruur.
Iyada oo loo marayo ogaanshaha dhererka bartilmaameedka, gawaarida dukaamada waaweyn iyo bartilmaameedyada kale si otomaatig ah ayaa loo sifeyn karaa. MRBdadka tirinaya xalka waxay bixin kartaa hal RJ45, hal RS485 iyo hal wax soo saar fiidiyow ah isla waqtigaas, waxayna bixin kartaa nidaam warbixineed oo bilaash ah ama isdhexgal horumarineed oo heer sare ah, iyo taageerida keenista adeega gaarka loo leeyahay.
HPC009 Nidaamka tirinta dadku waxay leedahay xal guud oo taageera oo dhameystiran:
1. Adeegso sanduuqa xogta si aad si dhakhso leh u gayso nidaamka tirakoobka warbixin madaxbanaan iyo boorarka TV-ga.
2. Iyada oo loo marayo xarkaha isku xirka, marinka gaadiidka tooska ah ee isdhaafsiga, iyo barxadda daruuriga si loogu baaro xogta warbixinta.
3. Ku xir kumbuyuutarka kormeerka si toos ah u daawado tirakoobka kormeerka iyo sawirrada fiidiyowga firfircoon.
4. Bixinta barnaamijka isku xirka server-ka ee gaarka loo leeyahay ama agabyada horumarinta ee horumarka labaad.
5. Xakamaynta deggenaanshaha waxaa lagu xaqiijin karaa barnaamijka asalka ah ee HPC009 dadka tirinaya xalka.
Qeexida nidaamka tirinta dadka
Mashruuc Qalabka Halbeegyada Tilmaamayaasha Waxqabadka
Koronto DC12～36V Isbedelada danab ee 15% waa la oggol yahay
Isticmaalka awoodda 3.6W Celcelis ahaan isticmaalka awoodda
Nidaamka Luqadda Howlgalka Shiine / Ingiriis / Isbaanish
Interface hawlgalka Habka qaabeynta hawlgalka C / S
Qiyaasta saxda 95%
Iskuxirka dibedda Interface RS485 Heerka baud-ga ah iyo Aqoonsiga, shabakad mashiinno fara badan oo la taageeray
RS232 interface Heerka baudiga ah
RJ45 Qalabka khaladka, gudbinta hab maamuuska http
Soosaarida fiidiyowga Nidaamka PAL, NTSC
Heerkulka hawlgalka -35 ℃ ～70℃ Deegaanka hawo wanaagsan leh
Heerkulka keydinta -40 ~ 85 ℃ Deegaanka hawo wanaagsan leh
Celcelis ahaan wakhti-la'aan-fashilaad MTBF In ka badan 5,000 saacadood
Dhererka rakibida 1.9 ~ 2.2m
0.001 lux (jawi mugdi ah) ~ 100klux (qorraxda tooska ah ee banaanka), looma baahna iftiin buuxiya, saxsanaanta saamaynta uusan ku yeelanayn iftiinka deegaanka.
Heerka iska caabin Dhulgariir
Buuxiyo heerka qaran ee QC / T 413 "Xaaladaha farsamo ee aasaasiga ah ee qalabka korantada baabuurta"
Buuxiyo EN 62471: 2008 "Badbaadinta sawir-bayoolaji ee laambadaha iyo nidaamyada laambadda"
Darajada ilaalinta Buuxiyo IP43 (gabi ahaanba boodh-cadeyn, soo galid lidka-waterjet)
Kala-baxa kuleylka Fasax kuleylka qaabdhismeedka
Cabir 178mm * 65mm * 58mm
HPC009 3D Dadka Nidaamka Tirinta video
Waxaan leenahay noocyo badan oo IR ah Nidaamka tirinta dadka, 2D, 3D, AI Nidaamka tirinta dadka, had iyo jeer waxaa jira mid adiga kugu habboon, fadlan nala soo xiriir, waxaan kugula talin doonnaa midka ugu habboon Nidaamka tirinta dadka adiga 24 saac gudahood.
Hore: Kaamirada Gawaarida MRB ee loogu talagalay DVR mobilada
Xiga: MRB AI waxay ka hortageysaa HPC198